iOS 9.2 မှ iOS 9.3.3 အထိ Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်သော Pangu Jailbreak Tool ထွက်ရှိ - Myanmar Spirit
Home / IOS Knowledges / iOS 9.2 မှ iOS 9.3.3 အထိ Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်သော Pangu Jailbreak Tool ထွက်ရှိ
iOS 9.2 မှ iOS 9.3.3 အထိ Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်သော Pangu Jailbreak Tool ထွက်ရှိ
2:08:00 am tuntin
Apple ဟာ iPhone/Pad တွေအတွက် iOS9ရဲ့နောက်ဆုံး version အဖြစ် iOS 9.3.3 အထိထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ iOS 9.3.3 ထွက်ပြီးတစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာပဲ အခုလို iOS 9.2 မှ iOS 9.3.3 အထိ Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်သော Pangu Jailbreak Tool ထွက်ရှိလာတာပါ။ ယခု Tool ကိုအသုံးပြုပြီး
iPod Touch 6G စတဲ့ iDevices တွေကို Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်ပါမယ်။
Jailbreak လုပ်နည်းကိုလည်း တစ်ဆင့်ချင်းကြည့်လုပ်နိုင်အောင်လို့ အောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်ရော စာအနေနဲ့ပါ တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပေးထားပါတယ် ။ iOS 9.2 မှ iOS 9.3.3 အထိ Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်သော Pangu Jailbreak Tool ကိုအောက်က link မှာရယူပါ။
Jailbreak လုပ်နည်းကိုတော့ အောက်မှာကြည့်ရှုပါ။
Step 1: Jailbreak Tool ကို အရင် Download ရယူလိုက်ပါ။ Download Pangu Jailbreak ။ လက်ရှိမှာတော့ ဒီ Jailbreak Tool ဟာ Windows OS အတွက်ပဲထွက်ရှိပါသေးတယ်။
Step 2: Download ရယူပြီးပြီဆိုရင်တော့ Jailbreak Tool ကိုကွန်ပျူတာမှာ Setup ပြုလုပ်ပါ။
Step 3: သင့်ရဲ့ iPhone/Pad ကိုကွန်ပျူတာမှာချိတ်ဆက်ထားပြီး Jailbreak Tool မှာပါတဲ့ ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပါ။
Step 4:သင့်ရဲ့ Device ဟာ iOS 9.2 မှ iOS 9.3.3 တစ်ခုခုတင်ထားတာဟုတ်တယ်ဆိုရင် အောက်ပုံထဲကအတိုင်း Jailbreak လုပ်ဖို့ခလုတ်အစိမ်းလေးပေါ်နေပါမယ်။ အဲဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီး Jailbreak Process ကိုစတင်ရပါမယ်။ ကွန်ပျူတာမှာအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့။
Ifacaptcha is displayed during the process, enter it to continue. You might also be asked to enter your Apple ID and password (this is required to createadeveloper profile on your device).
Step 5: iPhone/Pad ထဲကို 25pp app လေးကိုသွင်းပါလိမ့်မယ်။ installation လုပ်တာပြီးပြီဆိုရင် PP Jailbreak app ကို iPhone/Pad ရဲ့ Home Screen မှာတွေ့ရပါမယ်။ ပြီးလျှင် iOS ရဲ့ Settings -> General -> Profile & Device Management ထဲကိုဝင်ပြီး Pangu developer profile ထဲက Trust “…” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Step 6: Home Screen ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့ PP Jailbreak app လေးကိုဖွင့်ပါ ။ push notifications နဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ်လာရင် accept လုပ်ပေးပါ။
Step 7: Screen အလယ်တည့်တည့်က စက်ဝိုင်းပုံစံခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ Jailbreak နဲ့မဆိုင်တဲ့ PP ဆော့ဝဲကိုဖုန်းမှာမသွင်းချင်ဘူးဆိုရင် အ၀ိုင်းခလုတ်အောက်က အမှန်ခြစ်ကိုဖြုတ်ခဲ့ပါ။
Step 8: Jailbreak Process စပြီဆိုတာနဲ့ သင့်ရဲ့ iPhone/Pad ကို Screen Lock ပြန်လုပ်ထားပါ။ “Storage Almost Full” notification ပေါ်လာရင်လည်း ignore လုပ်လိုက်ပါ။
Step 9: Jailbreak Process လုပ်နေစဉ်မှာ iPhone/pad ကို Screen Unlock ပြန်မလုပ်ပါနဲ့။ PP ဆော့ဝဲကနေ Lock Screen ပေါ်မှာ Notification တက်လာမှ Screen ကိုပြန်ဖွင့်ပါ။ Jailbreak Process ပြီးသွားတာနဲ့ သင့်ရဲ့ iPhone/pad က auto reboot ကျသွားပါမယ်။ ပြန်တက်လာရင် သင့် iPhone/pad ရဲ့ Home Screen မှာ Cydia app လေးကိုတွေ့မြင်ရပါပြီ။ Cydia app ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ “Preparing filesystem” ဆိုပြီးပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ခဏစောင့်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ Device က respring တစ်ကြိမ်ဖြစ်သွားပါမယ်။ ပြန်တက်လာရင် သင့်ရဲ့ iPhone/pad ဟာ Jailbreak အောင်မြင်စွာပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။